Coral Reef: ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး
Anonymous said on February 25, 2012 at 7:50 AM
Get well soon sis. I am also from Latha2(99 batch). I thought you are from 98 batch :) take care.
Anonymous said on February 25, 2012 at 7:59 AM
မမရေ....ဂရုစိုက်နော်...သူများနိုင်ငံ မိဘညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ အချိန် နေမကောင်းဖြစ်ရတာလောက် စိတ်အားငယ်ရတာမရှိဘူး။ မမ စဉ်းစားထားသလိုလေး ကျန်းမာရေး ပြန်လိုက်စားနော်။
ချစ်ကြည်အေး said on February 25, 2012 at 9:32 AM
တူတူပဲ သိလား။ အစ်မလည်း နေမကောင်းနေပေမဲ့ မတ်တပ်နာလို ဖြစ်နေတော့ သွားသွားလာလာနဲ့ ဒီလိုပဲ စိတ်ဆောင်ပြီး မောင်းနှင်နေတာ။ အိမ်ရောက်လို့ စိတ်လျှော့လိုက်မှ အိပ်ရာပေါ် ပုံလဲတတ်တာ။ စိတ်ဓါတ်တွေလည်း ကျတာ အခါအခါ။ ငါ ဒါလေးတောင်မှ မလုပ်နိူင်တော့ပါလားလို့ တွေးမိတာလည်း အခါခါပဲ။ အလုပ်ထွက်ဖို့ နားဖို့ တွေးမိလည်း လကုန်တိုင်း ရနေကျ လခလေး မြင်ရင်း၊ ငါ့ အသက်က အလုပ်ကနားရမဲ့ အသက် ဟုတ်သေးပါဘူးလေ ဆိုပြီး အားတင်းနေရတာပဲ ညီမရယ်။ ပျော်ပျော်နေနေရင်းနဲ့တောင် တစ်ခါတစ်လေ အားငယ်လွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ကျတယ်။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး အားမရလို့လေ...း(
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေမကောင်းတဲ့အခါ ညီမလိုပဲ သေခြင်းတရားကို သတိရမိပြန်တယ်။ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး ညီမရယ်။
စိတ်တော့ တင်းထားပါ ဇွန်ရေ....း))
ညီရဲ said on February 25, 2012 at 1:57 PM
ရေခြားမြေခြားမှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နေရတယ် အစ်မရေ... ဒီမှာက ဖျားရင်မလွယ်ဘူးလေ...
Shinlay said on February 25, 2012 at 2:08 PM
ဇွန်... ဂရုစိုက်နော်။ အလုပ်တွေ အများကြီးမလုပ်နဲ့ ။
နားနားနေနေလုပ်။ ကျမလည်း အသက်ကြီးလာတော့
ဟိုနားနာ၊ဒီနားနာပဲ။ ရေခြားမြေခြားမှာ တယောက်ထဲဆိုတော့ နေမကောင်းရင် အားငယ်မိတယ်။
ဇွန့် ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးလေး
ဇွန်မိုးစက် said on February 25, 2012 at 10:18 PM
@ Anonymous sis, I'm more senior than those in 98 batch. :D Glad to receive your comment with thanks.
နောင့်ရေ... ကျေးဇူးပါကွယ်။ မမလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကျန်းမာရေးပြန်လိုက်စားဖို့ အားတင်းနေပါတယ်။
မချစ်ရေ... လူချင်းမတွေ့ဖြစ်၊ ဖုန်းမပြောဖြစ်တာကြာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုနေလဲလို့ သတင်းမမေးမိဘူး။ ဂရုစိုက်ပါ အစ်မရေ၊ သွေးအားနည်းအခံရှိတော့ ပိုပြီး ပင်ပန်းနေမှာပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် ညီရဲရေ... ဒါတောင် မဇွန်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူနေတော့ တစ်ခုခုဆို သူတို့ဂရုစိုက်ပြုစုပေးလို့ သက်သာရတယ်။
အစ်မရှင်လေး... ညီမလည်း ဒီတစ်ပတ်တော့ ဘယ်မှမသွားဘဲ နားနေလိုက်တယ်။ နို့မို့ရင် တရှောင်ရှောင်နဲ့ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ အစ်မလည်း ဟိုမှာ ရာသီဥတုအေးတော့ ဂရုစိုက်ပါနော်။
လရိပ်အိမ် said on February 26, 2012 at 11:03 AM
ပန်းချီ said on February 27, 2012 at 7:11 AM
အစ်မဇွန်ရေ..နေကောင်းအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ အတူတူပဲ ဒီမှာလည်း နေမကောင်းရင် တစ်ခဏသံဝေဂရပြီး ဟိုလိုပြင်တော့မယ်၊ ဒီလိုပြင်တော့မယ်နဲ့ အမြဲကြံရွယ်နေတာပါပဲ။ နေကောင်းလာတဲ့အခါ ဖလန်း ဖလန်းပြန်လုပ်ချင်ပြန်ရော။ အသက်ကြီးလာတော့ နည်းနည်းတော့ ဆင်ခြင်ရတာပါပဲ မရေ။ အိုမင်းမစွမ်းလို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား။
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on February 29, 2012 at 10:56 PM